Tag: ọnụọgụ | Martech Zone
Ịgụ Oge: 3 nkeji Egwuregwu Egwuregwu Ndị Ahịa na-ahụ maka Mmekọrịta na-emepụta mmekọrịta dị mma n'etiti ụlọ ahịa ecommerce na ndị ahịa ha maka ahụmịhe echefu echefu nke ga-eme ka iguzosi ike n'ihe na ego nweta. ECRM nwere ike karịa onye na-eweta ọrụ Email (ESP) na ndị ahịa-lekwasịrị anya karịa ikpo okwu Mmekọrịta Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM). Kedu ihe bụ ECRM? ECRMs na-enye ndị nwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ume ịkọwapụta ụdị ndị ahịa pụrụ iche-ọdịmma ha, ịzụrụ ihe, na akparamagwa-ma nyefee ọmarịcha ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche nha site na iji data ndị ahịa anakọtara n'ofe ọwa ahịa agbakwunyere.
Fraịdee, Nọvemba 13, 2020 Mọnde, Febụwarị 15, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 7 nkeji Otu esi enyocha ma chọta ọrụ nkwenye email kachasị mma na weebụ. Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke ndị na-eweta yana ngwa ọrụ ebe ị nwere ike ịnwale adreesị ozi-e ziri ezi n'isiokwu ahụ.
Ịgụ Oge: 3 nkeji Nyere ikike nke WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya, ọ bụ ihe ijuanya na ntakịrị ụgwọ a na-akwụ ụgwọ na isi ihe na-agbanwe n'ezie. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbipụta ọ bụla - ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ blog nkeonwe - na-ele anya iji tọghata ndị ọbịa n'ime ndị debanyere aha ma ọ bụ atụmanya. Agbanyeghị, enweghị ihe dị n'ime ikpo okwu iji kwado ọrụ a. Convert Pro bụ WordPress ngwa mgbakwunye nke na-enye ndị na-adọkpụrụ & dobe editọ, na-anabata ekwentị
Monday, July 13, 2020 Mọnde, Febụwarị 15, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Weebụsaịtị na-agbakwunye ọkọlọtọ na-egosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-akwalite ọnụego ntụgharị ha na ntụkwasị obi ha. Pulse na-enyere ndị azụmaahịa aka igosipụta ọkwa nke ezigbo ndị mmadụ na-eme ihe na saịtị ha. N'ime ebe nrụọrụ weebụ 20,000 na-eji Pulse wee nweta mmụba ntụgharị nke 10%. Enwere ike ịhazi ọnọdụ na oge nke ọkwa ahụ nke ọma yana, mgbe ha jidere mmasị onye ọbịa ahụ, ha anaghị atụgharị uche na ebumnuche onye ọbịa ahụ nọ ebe ahụ. Ọ mara mma
Ịgụ Oge: 2 nkeji Otu n'ime ndị ahịa anyị nọ na Squarespace, usoro njikwa ọdịnaya nke na-enye ihe niile dị mkpa - gụnyere ecommerce. Maka ndị ahịa na-ahụ maka onwe ha, ọ bụ nnukwu ikpo okwu nwere ọtụtụ nhọrọ. Anyị na-akwado kwadoro WordPress n'ihi ike ya na-enweghị njedebe yana mgbanwe… mana ụfọdụ Squarespace bụ nhọrọ siri ike. Ọ bụ ezie na Squarespace enweghị API na ọtụtụ nde ngwaahịa arụpụtara nke dị njikere ịga, ị ka nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu iji bulie saịtị gị. Anyị